Hydration eriri afo akpa Manufacturers & Suppliers - China Hydration eriri akpa bag Factory
Hydration eriri afo azu paaki Hiking ọsọ
Onye kacha mma maka akpa hydration n'èzí, tinye akpa hydration gị n'ime akpa, ma dozie ọkpọ mmiri na eriri ubu. Nwere ike mejupụta mmiri n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla ma hapụ aka gị. Ma ị na-arị ugwu, na-agba ọsọ, na-agafe obodo, ma ọ bụ ịgba ígwè agaghị emetụta gị.
N'èzí Reservoir eriri afo azu paaki cgba ígwè na-agba ọsọ
Egwuregwu egwuregwu n'èzí nwere ike ịmepụta ezigbo onye mmekọ na akpa mmiri. Ezubere nke ọma maka akpa mmiri egwuregwu. Nwere ike zuru oke kechie ma buru akpa mmiri gị. Na-enye gị ohere iburu akpa mmiri gị mgbe ị nọ n’èzí, n’ebunyeghị gị ibu arọ. Na-enye gị ohere ịgbakwunye mmiri mmiri n'oge ọ bụla n'èzí iji nọgide na-arụ ọrụ ahụ.
Nkebi nke: WBB-001
Nha: 45 * 21cm
Portable Water eriri afo paaki Red
Akpanye akpa akpa mmiri eji eme mmiri, ị nwere ike ọ bụghị naanị itinye akpa mmiri na ọnọdụ azụ, kamakwa tinye karama mmiri dị nro n'ime ọnọdụ obi, nke na-eme ka ikike ibu nke mmiri dịkwuo mma.
N'èzí Hydration eriri afo paaki maka Maa ụlọikwuu Hiking Cygba ígwè
Mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè, na-agba ọsọ, na-arị ugwu, ma ọ bụ na-agafe obodo n’èzí. Kwesịrị ịchọta ụlọ maka akpa mmiri gị ka i wee nwee ike ịhapụ aka gị ma lekwasị anya na mmega ahụ gị. Ngwakọta Nylon na ọmarịcha mma na-enye ọtụtụ mma maka mgbatị gị.
Egwuregwu azu paaki na-eme egwuregwu n'èzí. Akwa-mma naịlọn PITA ihe onwunwe. Nnukwu ohere, ohere akpa ume, dị mfe ma dị fechaa, na-eguzogide akwa, na-adaba adaba maka ị drinkingụ mmanya. Jiri akpa gị na njem gị na-atọ ụtọ, na-atọ gị ụtọ ma na-ebugharị gị, ọ dị mfe ịbanye n’agha.
N'èzí Sports Water Bag
N'èzí naịlọn ákwà hydration akpa nwere ike ijide 11 lita nke nnukwu ikike na nwere fechaa imewe nke 0,2 n'arọ. Na-enye gị ohere iburu ya n'azụ mgbe ị na-eme egwuregwu n'èzí. Akpa hydration na akpa mmiri bụ ezigbo ndị mmekọ mgbe niile. Ngwakọta nke ngwongwo abụọ a ga-ewetara gị ahụmịhe egwuregwu egwuregwu kachasị mma.